प्रदेश १ को नाम निर्विकल्प ‘किरात प्रदेश’ राख्न किन हिच्किचाउनु हुन्छ ! मुख्यमन्त्री ज्यु ? «
प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०७५, मंगलवार १४:२२
मुख्यमन्त्री ज्यु ! निर्विकल्प रुपमा प्रदेश १ को नाम किरात प्रदेश राख्न किन हिच्किचाउनु हुन्छ ? के छ किरात प्रदेश नाम भित्र त्यस्तो रहस्य जुन नाम राख्नै नहुने ? जो ऐतिहास्, भुगोल, सस्कृती र सभ्यताको नाता गहिरो छ ।
संसारले सम्मान र इज्जत गरेको, विश्वले चिनेको यस्तो पवित्र स्थल, जुन देशकै नाम राख्दा पनि कुनै समस्य छैन तर देश भित्रकै एउटा प्रदेशको नाम राख्नमा किन यस्तो समस्य छ ? ससार भरी कती छन कती यस्ता नाम नामका प्रदेश सबै भन्दा ठुलो प्रजातन्त्र मुलुक भारतकै पन्जाब र तमिलनाडु ससारकै शक्तिशाली देश अमेरिका लगायत दुई दर्जन मुलुकमा यस्तै नाम थुप्रै छन । यो हाम्रो गर्वको कुरा पनि हो तर यहि किरात नाम प्रदेशको राक्न किन कन्जुस ? के प्रदेशको नाम किरात राख्दा हाम्रो इज्जत र प्रतिष्ठा घट्छ ? हामीले लज्जा भएर शिर निहुराएर हिड्नु पर्ने हुन्छ ?
विश्वले मानेको र संसारले सम्मान गरेको संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल चोमोलुङ्माको खाकमा जन्मेर ट्याम्केको चिसो हावा खाएको भुमी हो । बिशुद्ध मनले भाबी पुस्तालाई सम्झेर र पुर्खाको योगदानको मुल्यान, मान र वास्ता गर्दै मनभित्र निस्वर्थको जन्जिर पालेर प्रदेश १ जनताको माग पूरा गर्नु भयो भने आगामी दिनमा त्यहाँको जनताले तपाईको विकल्प पनि खोज्नु पर्देन, जिबन भरी तपाइलाई सम्झिने छ र, एक ऐतिहासिक ब्यक्ती हुनुहुनेछ ।
हामीले चुनावको दौडानमा कुनै जातजाति, भाषाधर्म, सस्कृती, रितिरिवाज र लिंग नहेरी खुल्ला दिलले मत मागेका थियौ अनि त्यसै गरि मत दिएर विजयी बनाएका पनि हौं । आज पनि ऐतिहास्, भुगोल, सस्कृती र सभ्यतालाई मर्म राखेर किरात प्रदेश हुनुपर्दछ । त्यति बेलाको चुनावी मुद्दा समृद्धिको थियो । हो, त्यही मुद्द्दलाई टेकेर किरात प्रदेश साच्चिकै समृद्दिको हुनेछ । यो मतदाताहरुको आशा हो ।
जतिबेला चुनावी अभियनमा तपाईलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा परिचित गराउदै हामी घरदैलो अभियनमा हिड्डै गर्दा हामीले समृद्दिको आशामा किरात प्रदेश देखेको थियौ । समान र सम्मानजनक पहिचानको अनुभव बटुलेका थियौँ तर अर्को पक्षलाई उपेक्षा गर्ने किसिमको पहिचानको प पनि भेटेका थिएनौ । त्यही अनुरुप हामिलाई प्रदेशको नाम चाहियो ।
सबैले सम्मान र गर्व गर्ने नाम राख्नको निम्ती किरात प्रदेश नाम राख्ने हिम्मत गर्नु भयो भने यतिबेला प्रदेश १ को नाम स्वर्णिम अक्षरमा हुनेछ ।
एउटा बुढो बाहुन लौरो टेक्दै तपाईंको निम्ति मत माग्न घरदैलो अभियनमा हिडेको छ । एउटी बुढी बाहुनी आमै घाम पानी नभनी तपाइको निम्ति मत लगाउन घन्टौं लाईनमा बसेकी छिन । एउटा दलित केटो रातदिन तपाईंको पर्चा टास्दै र पम्प्लेट बाड्दै घर घर हिडेको छ । उहाहरुको एउटै आस थियो कि सबै जातजातिको सम्मान हुने र पहिचान झल्किने गरि प्रदेशको नामकरण हुनेछ भन्ने । त्यसैले किरात प्रदेश नामकरण हुनुपर्छ । परन्तु: प्राचिन किराँत सभ्यताको सम्मान गर्न, रक्षा गर्न र आदर गर्दै किरात प्रदेश बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
मलाई राम्रोसँग थाहा छ मुख्यमन्त्री ज्यु , यदि तपाईले हिम्मत गरेर प्रदेशको नाम किरात नै राख्नु भयो भने तपाईको सबैतिर जयजयकार हुनेछ अनि गुनगान गाउन सुरु हुनेछ। हुन सक्छ केहि चोकहरुमा तपाईको विरुद्द नाराबाजी हुन सक्छ। तपाईको २४ ठाउँ पुत्ला जलाउन सक्लान या त १ नम्बर प्रदेश बन्दको घोषणा गर्न सक्लान। यो स्वाभाविक पनि हो। त्यो कुनै नौलो कुरा पनि हैन। किनकि तिनीहरु नै हुन् जो देशको नाम बदल्नु पर्छ भन्दै उफ्रिनेहरु, तिनीहरु नै हुन् संबिधान स्वीकार्य छैन भन्दै जलाउनेहरु, तिनीहरु नै हुन् राष्ट्रिय झण्डा, जनावर र पोशाक परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्दै आन्दोलन गर्नेहरु। के त्यो जायज माग थियो त ?
त्यसैगरी, सबैको पहिचान खुल्ने, सबैले सम्मान र गर्व गर्ने नाम राख्नको निम्ती किरात प्रदेश नाम राख्ने हिम्मत गर्नु भयो भने यतिबेला प्रदेश १ को नाम स्वर्णिम अक्षरमा हुनेछ । साथसाथै तपाइको नाम पनि इतिहासको पानामा स्वर्णिम अक्षरले लेखिनेछ।